ए मेरो हजुरमा नायिका सुहानाको छातिमा सर्बसाधारणको नम्बर, राति राति अपाच्य फोन आउँदा हैरान
Thursday, 18 Apr, 2019 1:17 PM
५ बैशाख काठमाडौ । रंगमञ्चमा काम गर्ने निर्माता तथा कलाकाहरूको सामान्य लापरबाहीले कतिसम्म असर गर्छ भन्ने कुराको उदाहरण पछिल्लो समय देखिएको छ । सिनेमाकर्मिको सामान्य लापरबाहीका कारण एक निर्दोष व्यक्ति तनावमा परेको कुरा सार्बजनिक भएको छ । चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३ को ट्रेलरमा नायिका सुहाना थापाको छातीमा देखिएको नम्बरका कारण एक सर्बसाधारण तनावमा परेका छन् । टे«लरमा रातो रंगमा एउटा मोबाइल नम्बर लेखिएको छ – ९८४१.....
छातिमा उक्त मोबाईल नम्बरसँगै अंग्रेजी अक्षरमा ‘लव यू आर्या ! प्रेम’ पनि लेखिएको छ । तर उनको छातिमा टाँसिएको नम्बर भने कुनै नलाग्ने नम्बर अथवा सिनेमार्की नभएर एक सामान्य व्यक्तिको रहेछ । उक्त नम्बर काभ्रेका वीरध्वज तामाङको परेछ । सिनेमाकर्मीले राखिदिएको यहि नम्बरकै कारण आजकल उनी निकै तनावमा परेका छन् । नायिकाले छातीमा लेखेको नम्बर तामाङको रहेछ । चलचित्रमार्फत् मोबाइल नम्बर प्रचारप्रसार भएपछि उनी अहिले तनावमा छन् ।
बिहान, दिउँसो र मध्यरातमा समेत उनलाई फोन आउने गरेको छ । ‘कतिपयले मात्तिदै फोन गर्ने गरेका भन्दै उनले यसबाट आफ्नो पारिवारिक जीवनमै असर गरेको बताए । कतिपय फोन त अपाच्य शब्द बोल्ने गरेको उनको गुनासो छ । आफुले कानूनी कारवाहीका लागि केही नजानेको भन्दै तामाङले ‘मैले ‘कहाँ गएर के गरूँ ? मलाई केही थाहा छैन,’ ‘ममाथि परेको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?’ चलचित्र निर्माण समूहको असावधानीले सर्वसाधारणको नम्बर प्रचारप्रसार हुँदा तनाव खेप्नुपरेको छ । भन्दै गुनासो गरे । उनले चलचित्र ए मेरो हजुर ३ का टीमलाई आफूले भेट्न चाहेकोे बताए । ‘एक पटक उनीहरूलाई भेट्न म कुमारी हलमा पनि पुगेको थिएँ,’ तामाङले भने, ‘मैले आफ्नो कुरा राख्न खोजें तर उनीहरूले वास्ता गरेनन् ।’उनले भने ।